umshini wokukhipha umshini we-sisal fiber intengo engcono kakhulu umshini wokukhipha i-jute hemp
Umshini wokukhipha umshini we-Sisal fiber usetshenziselwa ukukhanda izinhlobo ze-fiber kusuka kwisal,ramie, jute, kenaf,hemp,isiqu sikabhanana,iqabunga lephayinaphu njll. Lo mshini wokukhipha isalal ungaqinisekisa ukukhiqizwa kokuphepha,Ukuhlanzeka kwefilakisi elihlanzekile futhi hhayi ukugqekeza ifilakisi yefilakisi.Jute isitholi somshini sisebenza kahle ngesikhundla esiphakeme, nqoba umsebenzi wezandla wendabuko. ukonga abasebenzi nesikhathi,ngentengo ephansi kepha khiqiza i-fiber ephezulu.
Umshini wokukhipha i-fiber Jute fiber wenziwa ikakhulukazi ngohlaka, imigqomo yesigubhu, ishidi lebanga elihleliwe, umlomo owondlayo, ikhava yezokuphepha,imoto,i-rolling rolling,Umshini wokukhipha i-conveyor etc.our sisal fiber isizinda somshini ungaqhutshwa ngemoto kagesi noma ngenjini yedizili.Ukukhethwa kwamandla okuhlukile kungahlangabezana nesidingo samakhasimende ahlukile, ikakhulukazi indawo emfishane yamandla kagesi.
I-Sisal fiber iyindwangu ebalulekile eluhlaza edingekayo ekukhiqizweni kwezimpahla ezahlukahlukene,njengama-doormats, ukuvuthwa kwezimboni,izindophi, izintambo kanye nezindatshana ezahlukahlukene, njengezikhwama zokuthenga, i-coaster wall hanger, i-pot hanger, amatafula etafula, nezinye izimpahla eziningi. ezinsukwini zakudala ,Ukukhishwa kwe-sisal fiber kwenziwa kakhulu inqubo eyenziwe ngesandla.iyikokukhiqiza okuphansi kuphela, kepha futhi kwandise kakhulu umthwalo womsebenzi wabalimi. Ukusetshenziswa komshini we-jute fiber peeling kungangezela ukukhiqizwa ngezinga elikhulu kodwa futhi kunciphise nomsebenzi womlimi. Ukukhishwa kwefayibha kumshini we-sisal fiber extractor kuphezulu ngekhwalithi uma kuqhathaniswa nokukhipha i-fiber fiber.
IVictoria Farm Machine eyonikeza uhla oluvelele lomshini we-sisal fiber extractor. Umshini wokukhipha i-Victor brand sisal uthunyelwe eMelika, Japan, I-Ecuador, ERwanda, I-Bangladesh, Kenya, E-Uganda, IBhutan, igalikuni, IGibhithe njll.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini we-sisal fiber extractor
150I-M2 / Ihora
Imoto kagesi / injini yedizili
1000-1200r / iminithi